PulseAudio 12 yakaburitswa ine zvakawanda zvakagadziridzwa | Linux Vakapindwa muropa
PulseAudio, iyo multiplatform ruzha server yakagadzirirwa kushanda nePOSIX inoenderana masisitimu, yagamuchira yayo nyowani yekuvandudza pamwe nekuwanda kugadzirisa.
Pakati pekuvandudzwa kwe PulseAudio 12 Tinogona kutaura zviri nani latency neiyo Bluetooth A2DP mbiri, iyo zvakare inovandudza A / V sync, yakanyatsoita latency nemidziyo yeAirPlay, kugona kuisa pamberi HDMI kuburitsa pamusoro peS / PDIF kuburitsa, HSP tsigiro yemamwe mahedhifoni eBluetooth uye kugona kugonesa kuburitsa uye kuisa mune macOS.
PulseAudio 12 inowedzerawo rutsigiro rwe stereo kuburitswa kubva kuSteelseries Arctis 7 mahedhifoni uye maikorofoni yekuisa kubva kuDell Thunderbolt TB16, iyo nyowani reverb sarudzo inogona kushandiswa Speex echo kukanzura, module nyowani. module-gara-sosi, Nani kuziva miedzo paperclips Audio 6 uye rutsigiro zvirinani rwekuisa dhijitari kubva kwakasiyana makadhi eUSB.
Intel HDMI LPE mutyairi anovandudza, default Bluetooth A2DP mbiri
Vashandisi kusimudzira yavo system kuPulseAudio 12.0 vanozokwanisa kusarudza default Bluetooth A2DP mbiri pachinzvimbo cheiyo HSP mbiri. Iyo Intel HDMI LPE mutyairi haachakonzeri nyaya dzeCPU uye inoshanda zvikuru nemaungira masisitimu.
Module-ladspa-sink module uye nharo "sink_input_properties" zvakawedzerwa uye module-yakawedzera-dzimba module yakagadziridzwa kuti ishandise XDG_DATA_DIRS mune. - pa - batanidza iyo ikozvino inoregedza chaiwo madhizaini.
Chekupedzisira, PulseAudio 12 inogadzira mamiriro emafaira asingaverengeke nevashandisi vese mune system system, la esdcompat chishandiso hachioneke kana rutsigiro rwakaremara, inoshandura chikamu cheqpaeq cheQt 5 uye chinoshandura rezinesi kubva kuAGPL kuenda ku LGPL, pamusoro pekuunza kuenderana nemutauro weVala uye raibhurari yeGNU C mushanduro 2.27. Unogona kurodha PulseAudio 12 kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » PulseAudio 12 yakaburitswa ine zvakawanda zvakagadziridzwa
Ichi chingave chiri chikonzero nei changa chiri kuenda kwemazuva mashoma, ini ndine yazvino vhezheni yeLXLE yakaiswa uye kamwe kamwe pasina kubata chero chinhu chakamira kutsvaga kadhi rezwi, ndadzorera iyo OS zvakare uye yariwana zvakare, kunyangwe pa nguva dzinonyangarika nekuti kana kurira.
Pane mumwe munhu ane matambudziko here?
Ndizvozvo. Kana ini ndaifanira kupa huremu hwakawanda kuna Alsa, kuyedza kusiya pulseaudio kune yakashomeka kushoma pamwe nekuda kweichi chiitiko. Ini ndaifanirwa kupota ndichitanga ne aplay -l kuti ndiwane iro rakakodzera chimiro uye riwedzere kune ~ / .asoundrc